Ogaden Online: The official homepage of Ogaden on the Internet - Saca Faarsa Diida Saddex Maalintuu qado Sanduluu ku soo noqon!!!
Text size	Home Horn NewsDjibouti Somalia Eritrea Kenya Ethiopia Ogaden WararkaOgaden Itoobiya Soomaaliya Kenya EntertainmentMusic HealthDiet and Fitness You and Your Family Commentary & AnalysisEditorial Opinion Community EventsWararka Tacsi Tahniyad Ogeysiis Announcement Radio Xoriyo Radio ICDSabti Axad Isniin Arbaco Radio Qorahay Home Opinion Saca Faarsa Diida Saddex Maalintuu qado Sanduluu ku soo noqon!!!
Saca Faarsa Diida Saddex Maalintuu qado Sanduluu ku soo noqon!!!	Sunday, 13 November 2011 22:39	Ogaden Online	Waddanigu siduu u eg yahay? waddaninnimaduse ma jibbo markuu arko meel waddanka lagu hadal hayo qaadaysaa, mise waa hammi lafta iyo dhuuxa kaga jira. Waddani qofka la yidhaa qof la diri karo ama la baddali karo ma aha. Waayo wuxuu mar walba og yahay, in aan waddanka laga xigin waajibaakiisuna ay qof walba saaran yihiin. Wuxuuna u hormarinayaa naftiisa oo hawl iyo dan kasta oo waddankiisa loo qabanayo isagaa ka kow ah. Wuxuuna mar walba ku taamayaa in uu xalliyo dhib kasta oo waddanka haysta, illaa uu ka dhimanayo. Dadka intay ummadda dhex boodaan in maalmo ah, kolka ay siday rabeen u noqon waydo, dhinaca kale ka soo jeedsanaya, ee waddankiisii iyo dadkiisii caksiga ku noqonaya waxaa la yidhaa "DANAYSTE"ee waddani ma aha. Ujeeddadiisuna waa siduu naftiisa ku raalli galin lahaa ee ma aha in uu waddan u halgamayo. Waa su'aale dalkiisii shalay uu lahaa waa la haystaa iyo dadkiisii uu lahaa waa la gumaystaa maxaa uga dambeeyay ? Meeshii shalay gubanaysay ee uu dadkayga waa la dhibaa ugu dhawaaqayay. maxaa qaboojiyay? Hadalka murtidiisu waa danayste kolba meeshuu is yidhaa dan gaar ah ka eego ayuu u safrayaa runtiina ma oga dhibka iyo magac xumada uu ku dambayn. Waxaana u fiican intaanu galin dabinka inuu eego kuwii ka horeeyay meesha ay maanta yaalliin . aakhiro seegga iyo rajo xumada haysata. Waxaad hadal ku soo xidhayaa "Saca faarsa diidaa saddex maalintuu qado san-dulluu ku soo noqon". Nimaan kuu furi doonin yuuna kuu rarin. Danaystoow Allaha ku soo hanuuniyo.--Suad HassanTweet
Last Updated ( Sunday, 13 November 2011 22:50 )